Imtixaanka qaran oo culeys weyn ku haya macallimiinta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Imtixaanka qaran oo culeys weyn ku haya macallimiinta
La daabacay fredag 7 juni 2013 kl 11.05
Hoggaamiyaha Ururka Macallimiinta Eva-Lis Sirén iyo Wasiirka Waxbarashada Jan Björklund.
Macallimiin badan ayaa dareensan in maamulidda imtixaanka qaran uu ku hayo culeys weyn oo abuura in ay waqti u waayaan hawlihii waxbaridda iyo in aysan macallimiin badani ku niyadsamayn shawadooda. Sidaasna waxaa sheegay ururka macallimiinta oo waqtiyadii arkaayey in macallimiin badan aysan ku faraxsanayn xirfaddooda macaliimiinimo wixii ka dambeeyey markii la dhaqangeliyey imtixaanada guud ee cilmiga bulshada iyo culuunta sayniska. Sidaas waxaa sheegtay hoggaamiyaha ururka macallimiinta Eva-Lis Sirén.
- Sawir dhinacyo badan ayaan arrintaan ka helnay. Macallimiin badan ayeyna welwel iyo walbahaar ku abuurtay, waayo tani ma aha shaqada macallimiinta oo ah in ardayda waxbaraan oo natiijo wanaagsan gaarsiiyaan.
Ujeeddada imtixaanka qaranka laga leeyahay ayaa ah in lagu hubiyo in ardaydu ay gaartay heerka aqoonta ee ku cad qorshaha waxbarashada qaranka. Imtixaanada xisaabta, af-iwiidhishka iyo af-ingiriisiga ka sokow waxaa sannadkaan la dejiyey in tijaabiyo in ardayda fasalada 6aad iyo 9aad laga qaado imtixaan qaran ku saabsan cilmiga bulshada iyo culuunta sayniska.
Ururka macallimiintu wuxuu doonayaa in imtixaanada qaranka ee xisaabta, af-iswiidhishka iyo af-ingiriisiga sidooda loo sii wado, laakiin imtixaanada cilmiga bulshada iyo culuunta sayniska laga dhigo maaddooyin ikhtiyaari ah oo qofkii doonayaa galo.